Mourinho oo si quus ah uga hadlay hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Pogba – Gool FM
Mourinho oo si quus ah uga hadlay hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Pogba
Liibaan Fantastic March 31, 2018
(Manchester) 31 Maarso 2018 Tababaraha Manchester United ee Jose Mourinho ayaa si quus ah uga hadlay hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Paul Pogba.
Mourinho ayaa bilaabay inuu keyd galiyo laacibka ugu qaalisan Manchester United kadib guul daradii kooxdiisa ka soo gaartay Tottenham markaas oo qaab ciyaareed liita uu soo bandhigay laacibka reer France.
Jose ayaa sheegay inuusan ka war hayn sababta keentay hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Pogba, wuxuuna saxaafada u sheegay inay Pogba qudhiisa waydiiyaan sababtaas maadaama isagu uusan ogayn.
Ka hor kulanka galabta Manchester United ay marti qaadi doonto Swansea City ayaa la waydiiyay tababare Mourinho sababta keentay hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Pogba, wuxuuna ku jawaabay:
“Isaga waydiiya marka aad fusad ku heshaan si uu idin kugu sheego waxa uu ku fikirayo, aniga shaqadayda ayaan qabsanayaa, waana waxa kaliya ee aan qaban karo”.
Waxaa xusid mudan in calaamad su’aal la saaray tababare Mourinho kadib qaab ciyaareedkii Pogba uu ku soo bandhigay isbuucii hore xulkiisa France gaar ahaan kulankii Ruushka oo uu dhaliyay gool isla markaana uu caawiyay mid kale.
TOOS u daawo: Crystal Palace vs Liverpool - LIVE (Shaxda sugan)
Barcelona oo ku dhaw inay soo barbarayso rikoor ay Real Sociedad horay uga samaysay La Liga